Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in BlackBerry
Waayo, qaar badan oo naga mid ah, telefoonada naga fog ka muhiimsan qalab kasta oo aannu u leedahay - ma aha oo kaliya aanu ku kaydi xogta gaarka ah, laakiin xogta oo loo isticmaalo shaqada iyo sidoo kale. Sida aan ku koraan dheeraad ah oo ku lifaaqan telefoonada naga, waxaa caadi ah in la gaarsiiyo si kuwa fiican. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo naga mid ah waxay u muuqdaan in ay ku dhegeen brand la mid ah telefoonada. Maxaad ka fogaato inaan baddalno phone Samsung in, tusaale ahaan, Blackberry ah?
Ma aha sababtoo ah telefoonka Samsung ah waa ka sii xoogbadan, laakiin mar walba waxaan ka cabsan inuu ku noqon doono arrimaha markii wareejinta macluumaadka u dhexeeya labada telefoonada. Tani waa cabsi dhab ah oo aan iska dhigin dramatized - halkan waa labo ka mid ah arrimaha guud oo ku saabsan xogta ka Samsung gudbaayo BlackBerry:
Tan iyo markii labada telefoonada harsan hawlgalka nidaamyada kala duwan (Android vs. BlackBerry OS), waxaa suuro gal ah laga yaabaa in xogta lumaan inta ay socoto wareejinta; iyo Maadaama uu dhufto ee kala duwan, dhaqaaqin xogta ka mid phone si kale u baabbi'in doonaa waqti dheeraad ah oo ku lug yeelan doontaa habraac ka sii daalin.
Waxaa jira dad badan software iyo Apps halkaas oo uu soo caawinta dadka jiraan in ay xogta ka Samsung wareejiyo BlackBerry. Haddii aadan diyaar u ah inay bixiso qalab adeeg oo aad ka soo caawin, waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah fursadahan:
Habkani waa mid ka mid ah habka ugu fudud ee xogta ka Samsung wareejiyo BlackBerry. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ka shaqeyn doonaan oo kaliya on BlackBerry 10 OS.
Tallaabada 1. Isticmaalka cable USB ah, isku xiro labada qalabka si aad PC ama Mac.
Tallaabada 2. Fur aad Windows Explorer (Start> Accessories> Windows Explorer) on PC ama jiheeye (ay icon waa ku xirto ah) on Mac.
Tallaabada 3. Fur aad Samsung oo fayl qalab BlackBerry. Dooro faylasha aad rabto in lagu wareejiyo ka qalab folder Samsung. Waxaad hadda jiidi karaan jeedi files galay aad folder qalab BlackBerry.
Fur aad Samsung oo fayl qalab BlackBerry. Dooro faylasha aad rabto in lagu wareejiyo ka qalab folder Samsung. Waxaad hadda jiidi karaan jeedi files galay aad folder qalab BlackBerry.
1 click phone in qalab kala iibsiga telefoonka: Wondershare Trans Mobile
Waayo, ammaan iyo khatar la'aan hab loo buunbuuninayo-free dheeraad ah loogu najixi karo wareejiinta aad xiriirada, sawiro, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, files warbaahinta, barnaamijyadooda iyo waxyaabaha taariikheed, waxaan jeclaan lahaa in aan u soo jeedin la isticmaalayo Wondershare MobileTrans . Waxa aynu inta badan ku jeclayd software tani waa in ay wax walba ka guuro qalabka oo dhan, tusaale ahaan marka wareejinta xiriirada aad u, ma aha oo kaliya ku wareejin doonaa magacyada iyo lambarada, laakiin sidoo kale cinwaanada emailka, magacyada shirkadda, horyaal shaqo iwm
Ogow waxa software taas oo ka dhigaysa weyn:
Waxa ay taageertaa in ka badan 3,000 oo qalabka lagu daydo oo waa la jaan qaada bixiyayaasha ugu;
Haddii aad raadinayso in ay ku deeqaan ama iibiso Samsung, software waa ay awoodaan in ay u tirtiri soo baxay oo dhan xogta shakhsiga aad ka Samsung, si nabad ah oo si joogto ah;
Awood u leh in aad telefoonada asalka dib-up software, tusaale ahaan Samsung Kies, MobileGo iyo Blackberry Desktop Suite, iyo sidoo kale qaar ka mid ah adeegyada daruur tusaale iCloud, Google Drive iyo DropBox shaqeeyaan;
Dib-up karaa xogta aad ka hor in aad telefoon cusub - sidaas, haddii aadan iibsaday cusub Blackberry, aad dib-up kartaa Samsung hore oo soo celin in aad telefoon cusub oo waqti dambe.
Poll: Waa kuwee Qalabka Blackberry Ma isticmaashaa?
Marka aad is barbar u dhexeeya qalabka socda guud ahaan nidaamyada hawlgalka kala duwan, BlackBerry u muuqataa in ay doorashada ugu yaraan aaladaha uu ka soo xusho. In kasta oo ay kala duwan oo xadidan, Blackberry ayaa qof walba daboolay. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah qalabka BlackBerry dheeraad ah oo caan ah oo dalka Mareykanka ah.
. BlackBerry Z30 muran Tani waa telefoonka ugu fiican BlackBerry inaad ka heli karto naftaada - waxaa la socda oo ku saabsan nooca ugu dambeeya ee BlackBerry 10 OS iyo hardware ayaa aad u cajiib ah. Tan waxa ay leedahay awood ah nolosha batteriga iyo raashinka laga cabsado, waa phone weyn u leedahay haddii aad u muuqdaan in ay si weyn ugu tiirsan qalabka mobile. Waxaa kale oo ay leedahay mid ka mid ah camera telefoonka ugu wanaagsan ee mobile ee suuqa.
Blackberry Q10. Waxaa ka mid ah dhammaan qalabka BlackBerry laga helo suuqa, Q10 waa mid ka mid ah in ay si dhow ula ekaan Z30, laakiin keyboard la yaab leh.
Blackberry Z3. phone Tan waxaa dhisay technology Miisaan si aad isticmaali kartaa Z3 shaqada iyo ciyaar labada.
Blackberry Z10. Waayo, telefoonka ugu fiican BlackBerry miisaaniyadda, Z10 qaadataa hawlan. Waxaad awoodi doontaa in aad doorato u dhexeeya screen xiriiri buuxa ah iyo mid ka shaqaysa keyboard QWERTY ah.
Blackberry Geesi 9900/9930. Waxaa la dhacsan laga yaabaa (weli waddaa on BlackBerry 7 OS), laakiin waxa ay weli waa ku weyn yahay haddii aad u baahan tahay oo kaliya xiriiraan ujeedooyin.
Blackberry Passport. Telefoonkan waxa dhisay workaholics u baahan tahay in aad eegto barasantigareeyaan xitaa on go ah. Waxay leedahay nolol batari fantastik ah iyo barnaamijyadooda.
Blackberry Classic. classic A waa Xisbiyada, samaynta wali mid ka mid ah doorashooyinka sare ee dalka Mareykanka. Dabcan, waxa la casriyeeyay si weyn uga soo version asalka.
Blackberry Porsche Design P9982. Haddii sharraxaadda ee taleefanka ayaa ka muhiimsan isagoo Details-dhamaadka sare, tani laga yaabaa in ugu wanaagsan idiin yeelayn. Waxay leedahay design weyn, laakiin Details dhexdhexaad ah in ay ku filan tahay celceliska Joe.
Q5 BlackBerry. Wixii phone soo galo, waxa ay leedahay Details weyn u tag qiimaha ay. Waa phone wanaagsan ku filan qoraalka iyo warbaahinta bulshada - tani waa sababta ay inta badan waxaa loo isticmaalaa marka ay gaaraan.
Blackberry Shuclada 9720. The Shuclada 9720 waa phone aasaasiga ah BlackBerry in uu leeyahay casriyaynta yaryar sida ay button kooxda BBM, iyo sidoo kale Multicast iyo Share-toosan-ka-Camera hawlaha.
> Resource > Android > Sida loo xogta ka Samsung wareejiyo Blackberry